Cali Guudlaawe Oo Xalay Kulan La Qaatay Xasan Sheekh - Wardeeq 24 TV Cali Guudlaawe Oo Xalay Kulan La Qaatay Xasan Sheekh Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Cali Guudlaawe Oo Xalay Kulan La Qaatay Xasan Sheekh
Cali Guudlaawe Oo Xalay Kulan La Qaatay Xasan Sheekh
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa Xalay kulan la qaatay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ku booqday hoyga uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda Cakiran ee dalka iyo dagaaladii u dhexeeyay Ciidanka dowladda & kuwo Milateriga ee kasoo horjeeda muddo kororsiga Farmaajo iyo sidii looga shaqeyn lahaa nabada, xasiloonida.
Inta uu socday kulanka dhexmaray Cali Guudlaawe iyo Xasan Sheekh ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday Go’aankii galabta maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug uga soo horjeesteen muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo.
Madaxweynihii hore ayaa Cali Guudlaawe iyo Axmed Qoorqoor uga mahadceliyay Go’aankii ay qeeteen, isla markaana Guudlaawe uu kula taliyey inuu ka qeyb noqdo dadaalka loogu jiro sidii dalka uga dhici laheyd doorasho heshiis lagu wada yahay.
Kulankaan dhexmaray Xasan Sheekh iyo Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa waxaa uu kusoo aadaya, iyada oo isbedel siyaasadeed la galay, kadib markii Qoorqoor, Lafta-gareen iyo Guudlaawe ay kasoo horjeesteen muddo kororiga Farmaajo, uuna taageeray Go’aankooda Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Previous articleGuddoonka Golaha Shacabka oo iclaamiyay kulanka uu Madaxweynuhu kula hadlayo
Next articleXasan Sheekh oo markale digniin kasoo saaray arrimaha ciidamada